भाग्य सूचक अथवा पैसा फलाउने बिरुवा,तपाईको घरमा रोप्नुहोस् यि बिरुवा राेप्नाले पैसा बर्सिनेछ! |
February 21, 2022 adminLeaveaComment on भाग्य सूचक अथवा पैसा फलाउने बिरुवा,तपाईको घरमा रोप्नुहोस् यि बिरुवा राेप्नाले पैसा बर्सिनेछ!
भाग्य सूचक अथवा पैसा फलाउने बिरुवा, तपाईको घरमा रोप्नुहोस् यि बिरुवा राेप्नाले पैसा बर्सिनेछ ! वास्तुशास्त्रमा त्यस्ता रूख र बोटहरू बताइएको छ, जसले घरमा पैसा बढाउन सहयोग गर्छन । सामान्यतयाः मानिसहरू कसैलाई पेच पर्नेगरी भन्नुपर्यो भने भन्छन् कि पैसा रूखहरूमा फल्दैन् ?
तर यदि हामीले तपाईंलाई रूखहरूमा पैसा फल्छ भन्यौँ भने तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ ? पक्कापनी, शास्त्रमा त्यस्ता रूख र बोटहरूलाई सम्पन्नता र समृद्धिसँग सम्बन्धित छन् भनिएको छ । आउनुहोस्, आज हामी तपाईंलाई ५ त्यस्ता रूख र बोटहरू बताउँदैछौं जसले तपाईंको घरमा पैसाको ओईरो लाग्नेछ ।
शमी रूख वस्तुको हिसाबले धेरै विशेष मानिन्छ । शमी रूख शंकरजीको सबैभन्दा प्रिय मानिन्छ । यस्तो विश्वास गरिन्छ कि घरमा शमी रूख रोप्नाले सम्पूर्ण गरिबी हटेर जान्छ । यो विश्वास गरिन्छ कि प्रत्येक सोमबार शिवलाई शमीको फूल र पातहरू चढाउँदा तपाईंको घरमा खुशी र समृद्धि आउँछ । तपाईं यसलाई पैंसाको रूख पनि भन्न सक्नुहुन्छ, किनकि यसले तपाईंको घरमा पैसाको बहार ल्याएर गरिबी हटाउँछ ।
मनी प्लान्टका बोटहरू लामो समयदेखि सबैका लागि मनपर्दो बोटका रूपमा देखिएका छन् । यसको दाखको बोट पनि धेरै सुन्दर देखिन्छ । साथसाथै यसले वातावरणलाई शुद्ध पार्ने पनि काम गर्दछ । मनी प्लान्टलाई इग्निस कोणमा राख्न उपयुक्त ठानिन्छ । यस दिशामा राख्दा यो राम्रो फल्छ र फुल्छ पनि ।
घरमा मनी पलान्टका बिरूवाहरू राख्ने गर्नाले तपाईंको घरमा पैसाको कहिल्लै पनि कमी हुँदैन । तपाईको कुनै पनि कार्य पैसाको अभावका कारण रोक्ने अवस्था आउँदैन । वास्तुशास्त्रमा, मनी ट्री भनिने बिरुवा आजकल धेरै लोकप्रिय भइरहेको छ । यसको मूल अमेरिकामा छ र यसलाई मनी रूखको रूपमा चिनिन्छ । यो बोट चिनियाँ फेङ्गशुई र वास्तुमा धेरै विशेष मानिन्छ ।
आजकल यो सजिलैसँग केही चयन गरिएका नर्सरीहरू वा अनलाइनमा उपलब्ध हुन सक्छ। तपाईको घरमा रोपेर तपाईले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। वास्तवमा अश्वगन्धा बोटलाई एकदमै धनी मानिन्छ। घरमा अश्वगन्धाको रूख रोप्नाले सुख र समृद्धि आउँछ । यो औषधीको रूपमा पनि उपयोगी छ र यसका धेरै अन्य फाइदाहरू रहेका छन् । अश्वगन्धाका फूलहरूलाई पनि भगवानको पूजामा प्रयोग गर्ने गरिन्छ।
श्वेटार्क दुधको बोट हो र यसलाई राम्रो भाग्यको सूचक पनि मानिन्छ । ख्याल गर्नुहोला कुनै सेतो पदार्थ निस्कने बिरुवा घरमा राख्नु हुँदैन । श्वेटार्क भनिने यो बोटलाई गणेशको प्रतीक मानिन्छ । यो उत्तम छ कि तपाईं यसलाई घरको सट्टा बार्दली वा बरान्डामा राख्नहोस् । यस कारणले गर्दा, घरमा सधैंका लागि शान्ति र खुशी रहन्छ । विषेश खोजका साथ जो कोही मानिसलाई उपयोगी यो सामाग्री तयार पारेका छौ । आशा छ । तपाई आफुले पढिसकेपछि अरुका लागि सेयर गरिदिनुहुनेछ । जानकारी सेयर गर्नुहोला।
मान्नुहोस या नमान्नुहोस,यी १० गलती जीवनमा दोहोरी रह्यो भने कहिले धनि बन्न सकिन्न।पैसा कमाए पनि सधै भइन्छ कंगाल।
खेत नभए पनि आफ्नै घरको सानो स्पेसमा गर्नुहोस माटोबिनाको खेती,मात्र लाखको लगानी,कमाइ करोड भन्दा धेरै,कसरी गर्ने भन्ने बारे जानकारी लिनुहोस्
सुत्ने बिस्तारा कुन दिशामा फर्काउने गर्नु भएको छ र शिरानी कुन दिशामा पार्नु हुन्छ?यस्ता गलती भुलेर पनि नगर्नुहोला,निम्त्निन्छ नसोचेको दुर्भाग्य